admin admin – Tamarmyay.com
စစ်ေ ဆး ခံ ရေ တာ့ မယ့် Facebook တည်ေ ထာင် သူ မာ့ခ်ဇူကာဘတ်
ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရာမှာ သက်သေထွက်ဆိုဖို့အတွက် ဗြိတိသျှပါလီမန်က ဖေ့စ်ဘွတ်တည်ထောင်သူ မာ့ခ်ဇူကာဘတ်ကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၆ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပ်အနိုင်ရဖို့အတွက် UK အခြေစိုက် ကိန်းဘရစ်ခ်ျ အနလက်တီကာ (Cambridge Analytica) ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီက ဖေ့စ်ဘွတ်ကိုတရားမဝင် အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် အခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ အဲဒီကုမ္ပဏီဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်က လူ သန်း ၅၀ ကျော်ရဲ့အကောင့်တွေက သတင်းအချက်အလက်တွေကို မလျော်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
UK ပါလီမန်မီဒီယာကော်မတီရဲ့ဥက္ကဌ ဒါမိန်းကော်လင်းစ် Damian Collins က သူ့ကော်မီတီဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်ကို data အချက်အလက်တွေ ဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ ထပ်ကာထပ်ကာမေးခဲ့ပေမဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အာဏာပိုင်တွေက အမှန်မခြေခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတွေဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်က အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုယူပြီး သူတို့ရောင်းချချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ရောင်းချလို့ရအောင် ဆွဲဆောင်ကြော်ငြာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိန်းဘရစ်ခ်ျ အနလက်တီကာ (Cambridge Analytica) ကုမ္ပဏီကတော့ အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုယူပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုနဲ့ မဲဆွယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသူ ခရစ်စ်ဝိုင်လီဆိုသူက ပြောပါတယ်။
စဈေ ဆး ခံ ရေ တာ့ မယျ့ Facebook တညျေ ထာငျ သူ မာ့ချဇူကာဘတျ
ဖစျေ့ဘှတျနဲ့ပတျသကျပွီး ထှကျပျေါနတေဲ့သတငျးတှကေို စုံစမျးစဈဆေးရာမှာ သကျသထှေကျဆိုဖို့အတှကျ ဗွိတိသြှပါလီမနျက ဖစျေ့ဘှတျတညျထောငျသူ မာ့ချဇူကာဘတျကို တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။
၂၀၁၆ အမရေိကနျသမ်မတရှေးကောကျပှဲမှာ ဒျေါနယျထရမျ့ပျအနိုငျရဖို့အတှကျ UK အခွစေိုကျ ကိနျးဘရဈချြ အနလကျတီကာ (Cambridge Analytica) ဆိုတဲ့ ကုမ်ပဏီက ဖစျေ့ဘှတျကိုတရားမဝငျ အသုံးပွုခဲ့တယျဆိုတဲ့သတငျးထှကျပျေါလာပွီးနောကျ အခုလိုတောငျးဆိုခဲ့တာပါ။ အဲဒီကုမ်ပဏီဟာ ဖစျေ့ဘှတျက လူ သနျး ၅၀ ကြျောရဲ့အကောငျ့တှကေ သတငျးအခကျြအလကျတှကေို မလြျောကနျတဲ့နညျးနဲ့ အသုံးပွုခဲ့တယျလို့ စှပျစှဲခံနရေတာဖွဈပါတယျ။
UK ပါလီမနျမီဒီယာကျောမတီရဲ့ဥက်ကဌ ဒါမိနျးကျောလငျးဈ Damian Collins က သူ့ကျောမီတီဟာ ဖစျေ့ဘှတျကို data အခကျြအလကျတှေ ဘယျလိုအသုံးပွုသလဲ ထပျကာထပျကာမေးခဲ့ပမေဲ့ ဖစျေ့ဘှတျအာဏာပိုငျတှကေ အမှနျမခွခေဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
ကုမ်ပဏီတှဟော ဖစျေ့ဘှတျက အကောငျ့ပိုငျရှငျတှရေဲ့ အခကျြအလကျတှကေိုယူပွီး သူတို့ရောငျးခခြငျြတဲ့ပစ်စညျးတှေ ရောငျးခလြို့ရအောငျ ဆှဲဆောငျကွျောငွာကွတာဖွဈပါတယျ။
ကိနျးဘရဈချြ အနလကျတီကာ (Cambridge Analytica) ကုမ်ပဏီကတော့ အကောငျ့ပိုငျရှငျတှရေဲ့ အခကျြအလကျတှကေိုယူပွီး စိတျပိုငျးဆိုငျရာဆှဲဆောငျမှုနဲ့ မဲဆှယျခဲ့တာဖွဈတယျလို့ အဲဒီကုမ်ပဏီမှာ အလုပျလုပျခဲ့ဖူးသူ ခရဈဈဝိုငျလီဆိုသူက ပွောပါတယျ။
Author admin adminPosted on March 21, 2018 Categories NewsLeaveacomment on စစ်ေ ဆး ခံ ရေ တာ့ မယ့် Facebook တည်ေ ထာင် သူ မာ့ခ်ဇူကာဘတ်
အတွဲညီ စွာ လက်စွမ်းပြခဲ့ တဲ့ေ ရွှဘ
မနက်ပိုင်း တပ်မတော် ခြေလျင် စစ်သည်တွေနဲ့ TNLA ကစ်တယ်
TNLA အထိနာပီး ဆုတ်ပြေးတယ်
ရွှေဘ တပ် က ၁၂၀ မမ နဲ့
၁၂၀ တကမ်း non stop လှမ်း ပစ်တာ
TNLA ကလည်း ပြေးတာ လုံးနေတာပဲ
နောက်ဆုံး ၁၂၀ မမ မော်တာ မမှီတဲ့
TNLA ကောင်ဒေ အေးဆေးဖြစ်ပီ ဆိုပီး
မီ ၃၅ တိုက်ခိုက်ရေး ပုဇဉ်း ၂ စီး ပျံဝဲလာပီး
နာရီဝက် လောက် ပတ်ဝုန်းသွားတာ
ရွှေဘ ခြေလျင် + အမြောက် + လေ
ပူးတွဲ စစ်ဆင်ရေး ရဲ့
အောင်မြင်မှု တစ်ခု ပေါ့ ဗျာ
အတှဲညီ စှာ လကျစှမျးပွခဲ့ တဲ့ေ ရှဘ
မနကျပိုငျး တပျမတျော ခွလေငျြ စဈသညျတှနေဲ့ TNLA ကဈတယျ
TNLA အထိနာပီး ဆုတျပွေးတယျ
ရှဘေ တပျ က ၁၂၀ မမ နဲ့
၁၂၀ တကမျး non stop လှမျး ပဈတာ
TNLA ကလညျး ပွေးတာ လုံးနတောပဲ
နောကျဆုံး ၁၂၀ မမ မျောတာ မမှီတဲ့
TNLA ကောငျဒေ အေးဆေးဖွဈပီ ဆိုပီး
မီ ၃၅ တိုကျခိုကျရေး ပုဇဉျး ၂ စီး ပြံဝဲလာပီး
နာရီဝကျ လောကျ ပတျဝုနျးသှားတာ
ရှဘေ ခွလေငျြ + အမွောကျ + လေ
ပူးတှဲ စဈဆငျရေး ရဲ့
အောငျမွငျမှု တဈခု ပေါ့ ဗြာ
Author admin adminPosted on March 21, 2018 Categories NewsLeaveacomment on အတွဲညီ စွာ လက်စွမ်းပြခဲ့ တဲ့ေ ရွှဘ
နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးမှ အနားယူသွားလျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၇၃ အရ ဒုတိယသမ္မတများရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့က ဒုတိယသမ္မတစ်ဦးကို ထပ်မံ၍ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးရမည် ဖြစ်သည်..
အဆိုပါ ဒုတိယသမ္မတများထဲမှ သမ္မတကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ထပ်မံရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးရမည် ဖြစ်သည်။
(နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း၃ ပါ ပုဒ်မ ၇၃)
(က)နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ရာထူးသက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ နုတ်ထွက်သောကြောင့် ဖြစ်စေ ကွယ်လွန်သောကြောင့်ဖြစ်စေ ၊ ထာဝစဉ်မစွမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးနေရာ လစ်လပ်လျှင် ဒုတိယသမ္မနှစ်ဦးအနက် ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရွေးချယ်တင်မြှောက်စဉ်အခါက ဒုတိယဆန္ဒမဲအများဆုံးရရှိသည့် ဒုတိယသမ္မတက ယာယီသမ္မတအဖြစ် ထမ်းဆောင်ရမည်။
(ခ)နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးနေရာ လစ်လပ်သွားသည့်အချိန်သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပနေချိန်ဖြစ်လျှင် လစ်လပ်သွားသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကို ခုနှစ် ရက်အတွင်း ဖြည့်စွက်နိုင်ရေးအတွက် ယာယီသမ္မတက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အကြီးအမှူးထံ ဆောလျင်စွာ အကြောင်းကြားရမည်..
(ဂ)ယာယီသမ္မတထံမှ အကြောင်းကြားစာကို ရရှိသည့်အခါ လစ်လပ်သွားသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတကို ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် ဦးစွာရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့က ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အကြီးအမှူးက ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
(ဃ)သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့သည် ဒုတိယသမ္မတကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီးပါက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးပါဝင်သည့် သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့က ဒုတိယသမ္မတသုံးဦးအနက် မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။
(င)ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပချိန်မဟုတ်လျှင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အကြီးအမှူးသည် ယာယီသမ္မတထံမှ အကြောင်းကြားစာရရှိသည့်နေ့မှစ၍ ၂၁ ရက်အတွင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူပြီး လစ်လပ်သောနိုင်ငံတော်သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်ရေးအတွက် အထက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
နိုငျငံတျောသမ်မတရာထူးမှ အနားယူသှားလြှငျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒပေုဒျမ ၇၃ အရ ဒုတိယသမ်မတမြားရှေးခယျြတငျမွှောကျရေးအဖှဲ့က ဒုတိယသမ်မတဈဦးကို ထပျမံ၍ ရှေးခယျြတငျမွှောကျပေးရမညျ ဖွဈသညျ..
အဆိုပါ ဒုတိယသမ်မတမြားထဲမှ သမ်မတကို ပွညျထောငျစုလှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားက ထပျမံရှေးခယျြတငျမွှောကျပေးရမညျ ဖွဈသညျ။
(နိုငျငံတျောဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ အခနျး၃ ပါ ပုဒျမ ၇၃)
(က)နိုငျငံတျောသမ်မတသညျ ရာထူးသကျတမျးမကုနျဆုံးမီ နုတျထှကျသောကွောငျ့ ဖွဈစေ ကှယျလှနျသောကွောငျ့ဖွဈစေ ၊ ထာဝစဉျမစှမျးဆောငျနိုငျသောကွောငျ့ဖွဈစေ၊ တဈစုံတဈခုသောအကွောငျးကွောငျ့ဖွဈစေ၊ နိုငျငံတျောသမ်မတရာထူးနရော လဈလပျလြှငျ ဒုတိယသမ်မနှဈဦးအနကျ ၊ နိုငျငံတျောသမ်မတ ရှေးခယျြတငျမွှောကျစဉျအခါက ဒုတိယဆန်ဒမဲအမြားဆုံးရရှိသညျ့ ဒုတိယသမ်မတက ယာယီသမ်မတအဖွဈ ထမျးဆောငျရမညျ။
(ခ)နိုငျငံတျောသမ်မတရာထူးနရော လဈလပျသှားသညျ့အခြိနျသညျ ပွညျထောငျစုလှတျတျောအစညျးအဝေး ကငျြးပနခြေိနျဖွဈလြှငျ လဈလပျသှားသညျ့ နိုငျငံတျောသမ်မတရာထူးကို ခုနှဈ ရကျအတှငျး ဖွညျ့စှကျနိုငျရေးအတှကျ ယာယီသမ်မတက ပွညျထောငျစုလှတျတျောအကွီးအမှူးထံ ဆောလငျြစှာ အကွောငျးကွားရမညျ..
(ဂ)ယာယီသမ်မတထံမှ အကွောငျးကွားစာကို ရရှိသညျ့အခါ လဈလပျသှားသညျ့ နိုငျငံတျောသမ်မတကို ဒုတိယသမ်မတအဖွဈ ဦးစှာရှေးခယျြတငျမွှောကျပေးခဲ့သညျ့ သကျဆိုငျရာလှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားအစုအဖှဲ့က ဒုတိယသမ်မတတဈဦးကို ရှေးခယျြတငျမွှောကျပေးရေးအတှကျ ပွညျထောငျစုလှတျတျောအကွီးအမှူးက ဆောငျရှကျပေးရမညျ။
(ဃ)သကျဆိုငျရာလှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားအစုအဖှဲ့သညျ ဒုတိယသမ်မတကို ရှေးခယျြတငျမွှောကျပွီးပါက ပွညျထောငျစုလှတျတျောကိုယျစားလှယျအားလုံးပါဝငျသညျ့ သမ်မတရှေးခယျြတငျမွှောကျရေးအဖှဲ့က ဒုတိယသမ်မတသုံးဦးအနကျ မိမိတို့ကွိုကျနှဈသကျသညျ့ ပုဂ်ဂိုလျကို နိုငျငံတျောသမ်မတအဖွဈ ရှေးခယျြတငျမွှောကျရမညျ။
(င)ပွညျထောငျစုလှတျတျောအစညျးအဝေးကငျြးပခြိနျမဟုတျလြှငျ ပွညျထောငျစုလှတျတျောအကွီးအမှူးသညျ ယာယီသမ်မတထံမှ အကွောငျးကွားစာရရှိသညျ့နမှေ့စ၍ ၂၁ ရကျအတှငျး ပွညျထောငျစုလှတျတျောအစညျးအဝေးကို ချေါယူပွီး လဈလပျသောနိုငျငံတျောသမ်မတရှေးခယျြတငျမွှောကျနိုငျရေးအတှကျ အထကျပါနညျးလမျးအတိုငျးဆောငျရှကျရမညျ။
Author admin adminPosted on March 21, 2018 Categories NewsLeaveacomment on “သမ္မတအသစ်ဘယ်လိုရွေးမလဲ ”..
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးပျံတွေကို အမေရိကန်အနေနဲ့ အမှန်တကယ်ကြားဖြတ်နိုင်သလား?
ဒီမေးခွန်းမျိုးကို လူအတော်များများကဆီကကြားရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း မြောက်ကိုရီးယားနဲ့စစ်ဖြစ်အံ့ဆဲဆဲ အခြေအနေတင်းမာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပိုပြီးသိချင်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကမ္ဘာကျော်Forbesမဂ္ဂဇင်းမှာရေးသားထားတဲ့ Niall McCarthyရဲ့သုံးသပ်ချက်တစ်ခုကို ဘာသာပြန်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားဟာ လွန်ခဲ့တဲ့၂၀၁၇ခုနှစ်ရဲ့လအနည်းငယ်မှာ nuclear programပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ပြုံယမ်းမှဂျပန်နိုင်ငံကိုဖြတ်ကျော်ပစ်လွှတ်မှုနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဗုံးတစ်လုံးကိုလည်း စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲခဲ့သည်။ သံတမန်နည်းလမ်းဖြင့်သာ မြောက်ကိုရီးယားနှင့်အဆင်ပြေအောင်မပြုလုပ်နိုင်ပါက အမေရိကန်အပါအဝင် တောင်ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန်တို့အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ဒုံးပျံကာကွယ်ရေးစနစ်များမှာ အရေးအပါဆုံးနေရာမှာပဲရှိနေတော့မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍စစ်ပွဲဖြစ်မည်ဆိုပါကလည်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်ရန်အခြေအနေနီးစပ်ပြီး ပြုံယမ်းမှပစ်လွှတ်သည့်ဒုံးပျံများအားကြားဖြတ်နိုင်ရန် တောင်ကိုရီးယားတွင်အခြေချထားသော THAADဒုံးခွင်းဒုံးစနစ်များ၏အရေအတွက်ပေါ်တွင် မူတည်နေသည်။ လက်ရှိတောင်ကိုရီးယားတွင် THAADများချထားမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ တရုတ်စစ်တပ်နှင့်တောင်ကိုရီးယားပြည်သူအချို့မှ အငြင်းပွားနေကြသည်။ တရုတ်နိုင်ငံကတော့ THAADဒုံးခွင်းဒုံးစနစ်ကနေ တရုတ်လေကြောင်းပိုင်နက်မှာပျံသန်းနေတဲ့အရာတွေကို မြင်မှာစိုးရိမ်ကြပြီး တောင်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကတော့ THAADစနစ်ချထားတဲ့ဧရိယာပတ်ပတ်လည်ကို မြောက်ကိုရီးယားကပစ်မှတ်ထားမှာနဲ့ AN/TPY-2ရေဒါကထုတ်လွှတ်တဲ့ရေဒါလှိုင်းတွေကြောင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှာကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မြောက်ကိုရီးယားတို့ရဲ့အနုမြူစမ်းသပ်မှုတွေကြောင့် တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟာ အမေရိကန်ကိုTHAADဒုံးခွင်းဒုံးများချထားရန်သဘောတူညီခဲ့ပြီး ယခုအခါဒုံးပျံတင်ယာဉ်ခြောက်စင်းနှင့် AN/TPY-2ရေဒါတင်ယာဉ်တစ်စင်းအား တောင်ကိုရီးယားတွင်ချထားပြီးဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ တောင်ကိုရီးယားအစိုးရ၏ အမြှော်အမြင်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ဟုလည်းဆိုနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် 1999မှယခုအချိန်ထိ THAAD၏ကြားဖြတ်ပစ်ခတ်စမ်းသပ်မှု၁၄ကြိမ်အတွင်း ၁၄ကြိမ်စလုံးရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်ခဲ့သော စနစ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအား တာတိုပစ်၊ တာလတ်ပစ်တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးများ(SRBMs & MRBMs)သာမက ကမ္ဘာ့လေထုအပြင်ဖက်မှပစ်ခတ်မည့် တာဝေးပစ်တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံများ(ICBM)များပါဖျက်စီးနိုင်အောင် ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထားသည်။ ယခင်ရှိပြီးသားစနစ်များအနေဖြင့် ဒေသတွင်းဂျပန်နှင့်အမေရိကန်စစ်သင်္ဘောများတွင် Aegisဒုံးပျံကာကွယ်ရေးစနစ်အားတပ်ဆင်ထားသည်။ ဂျပန်ကမ်းခြေတွင်လည်း မြေပြင်အခြေစိုက်Aegisစနစ်အား တည်ဆောက်ထားသည်။ Aegisစနစ်၏အားနည်းချက်မှာ တာတိုနှင့်တာလတ်ပစ်တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးများ(SRBMs & MRBMs)ကိုကြားဖြတ်နိုင်သော်လည်း ကမ္ဘာ့လေထုအပြင်ဖက်မှလာမည့် တာဝေးပစ်တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးများ(ICBMs)အား ကြားမဖြတ်နိုင်ပေ။ ၂၀၀၁ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှ Aegisစနစ်၏ကြားဖြတ်စမ်းသပ်မှု၃၅ကြိမ်တွင် ၂၈ကြိမ်ထိအောင်မြင်မှုရှိခဲ့သည်။
Patriotဒုံးပျံကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုတော့ တောင်ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန်စစ်တပ်များတွင်အသုံးပြုသည်။ Patriotအား အရေးကြီးနေရာများအားကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ပြီး တောင်ကိုရီးယားမြို့တော်ဆိုးလ်မြို့ကိုကာကွယ်ရန် ပတ်ပတ်လည်တွင်နေရာချထားသည်။ Patriotစနစ်နှင့်ပတ်သတ်၍ ၁၉၉၁တွင်ဖြစ်ပွားသောပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအရ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများစွာလည်းရှိနေလေသည်။ သို့သော်လည်း မကြာသေးမှီကာလအတွင်းစမ်းသပ်ချက်များအရတော့ ရရှိလာသည့်အောင်မြင်မှုမှာကျေနပ်လောက်စရာရှိသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Ground-based Midcourse Defence(GMD)စနစ်မှာ အထက်ပါစနစ်များမှ မြောက်အမေရိကသို့ရောက်လာသောဒုံးပျံများအား ကြားဖြတ်ပစ်ခတ်ရန်ကြွင်းကျန်ပါက နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ဖျက်စီးရန်တည်ဆောက်ထားသည်။ အဆိုပါစနစ်မှာ မြေကြီးထဲသို့siloဖြင့် ဒုံးပျံအားထည့်သွင်းရသောစနစ်ဖြစ်ပြီး siloတစ်ခုတွင်ဒုံးပျံတစ်လုံးသာဆံ့သည်။ ကမ္ဘာ့လေထုအပြင်ဖက်မှဝင်လာမည့်ICBMများအား ဖျက်စီးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤစနစ်မှာကား အမေရိကန်တို့အဖို့စိတ်ချယုံကြည်ရန်ခက်ခဲနေလေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပစ်ခတ်စမ်းသပ်မှု၁၈ကြိမ်အတွင်း မအောင်မြင်မှု၈ကြိမ်ခန့်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာအတွင်း အစ္စရေးလုပ်Iron Domeစနစ်မှာ လွန်စွာနည်းပညာမြင့်ပြီး အောင်မြင်မှုအများဆုံးရရှိခဲ့သော ဒုံးခွင်းဒုံးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မှသက်သေပြခဲ့သည်။ ၂၀၀၀မှ၂၀၀၈ခုနှစ်အတွင်း ဟားမာစ့်စစ်သွေးကြွများမှပစ်ခတ်သည့် လက်လုပ်ဒုံးကျည်အစင်းလေးထောင်နှင့် မော်တာကျည်လေးထောင်နီးပါးစီအား အစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်သို့မကျရောက်ခင် ဖျက်စီးနိုင်ခဲ့သည်။ တောင်ကိုရီးယားအစိုးရအနေဖြင့်လည်း ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူရန် စတင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး Iron Domeမျိုးကွဲဖြစ်သော C-RAMအား ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၇တွင်ကြေညာခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ မြောက်ကိုရီးယားဖက်မှ အနုမြူဒုံးပျံစမ်းသပ်မှုများပိုမိုလုပ်ဆောင်လာသည့်တိုင်အောင် တောင်ကိုရီးယားအပါအဝင် အမေရိကန်နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှ ဒုံးခွင်းဒုံးပစ်ခတ်စမ်းသပ်မှုများအား မြောက်ကိုရီးယားနှင့်အပြိုင်အဆိုင်ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပေ။
မွောကျကိုရီးယားရဲ့ဒုံးပြံတှကေို အမရေိကနျအနနေဲ့ အမှနျတကယျကွားဖွတျနိုငျသလား?
ဒီမေးခှနျးမြိုးကို လူအတျောမြားမြားကဆီကကွားရပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အမရေိကနျသမ်မတဒျေါနယျထရနျ့တကျလာပွီးနောကျပိုငျး မွောကျကိုရီးယားနဲ့စဈဖွဈအံ့ဆဲဆဲ အခွအေနတေငျးမာပွီးနောကျပိုငျးမှာ ပိုပွီးသိခငျြကွပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသတျပွီး ကမ်ဘာကြျောForbesမဂ်ဂဇငျးမှာရေးသားထားတဲ့ Niall McCarthyရဲ့သုံးသပျခကျြတဈခုကို ဘာသာပွနျဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
မွောကျကိုရီးယားဟာ လှနျခဲ့တဲ့၂၀၁၇ခုနှဈရဲ့လအနညျးငယျမှာ nuclear programပွနျလညျစတငျခဲ့ပွီး ပွုံယမျးမှဂပြနျနိုငျငံကိုဖွတျကြျောပဈလှတျမှုနှငျ့ ဟိုကျဒရိုဂငျြဗုံးတဈလုံးကိုလညျး စမျးသပျဖောကျခှဲခဲ့သညျ။ သံတမနျနညျးလမျးဖွငျ့သာ မွောကျကိုရီးယားနှငျ့အဆငျပွအေောငျမပွုလုပျနိုငျပါက အမရေိကနျအပါအဝငျ တောငျကိုရီးယားနှငျ့ဂပြနျတို့အနဖွေငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ဒုံးပြံကာကှယျရေးစနဈမြားမှာ အရေးအပါဆုံးနရောမှာပဲရှိနတေော့မညျဖွဈသညျ။ အကယျ၍စဈပှဲဖွဈမညျဆိုပါကလညျး တောငျကိုရီးယားနိုငျငံမှာ အဓိကပဈမှတျဖွဈရနျအခွအေနနေီးစပျပွီး ပွုံယမျးမှပဈလှတျသညျ့ဒုံးပြံမြားအားကွားဖွတျနိုငျရနျ တောငျကိုရီးယားတှငျအခွခေထြားသော THAADဒုံးခှငျးဒုံးစနဈမြား၏အရအေတှကျပျေါတှငျ မူတညျနသေညျ။ လကျရှိတောငျကိုရီးယားတှငျ THAADမြားခထြားမှုနှငျ့ပတျသတျ၍ တရုတျစဈတပျနှငျ့တောငျကိုရီးယားပွညျသူအခြို့မှ အငွငျးပှားနကွေသညျ။ တရုတျနိုငျငံကတော့ THAADဒုံးခှငျးဒုံးစနဈကနေ တရုတျလကွေောငျးပိုငျနကျမှာပြံသနျးနတေဲ့အရာတှကေို မွငျမှာစိုးရိမျကွပွီး တောငျကိုရီးယားပွညျသူတှကေတော့ THAADစနဈခထြားတဲ့ဧရိယာပတျပတျလညျကို မွောကျကိုရီးယားကပဈမှတျထားမှာနဲ့ AN/TPY-2ရဒေါကထုတျလှတျတဲ့ရဒေါလှိုငျးတှကွေောငျ့ ဓာတျရောငျခွညျသငျ့မှာကို စိုးရိမျနကွေပါတယျ။ မညျသို့ပငျဖွဈစေ မွောကျကိုရီးယားတို့ရဲ့အနုမွူစမျးသပျမှုတှကွေောငျ့ တောငျကိုရီးယားကာကှယျရေးဝနျကွီးဟာ အမရေိကနျကိုTHAADဒုံးခှငျးဒုံးမြားခထြားရနျသဘောတူညီခဲ့ပွီး ယခုအခါဒုံးပြံတငျယာဉျခွောကျစငျးနှငျ့ AN/TPY-2ရဒေါတငျယာဉျတဈစငျးအား တောငျကိုရီးယားတှငျခထြားပွီးဖွဈသညျ။
ဤသညျမှာ တောငျကိုရီးယားအစိုးရ၏ အမွှျောအမွငျရှိသောဆုံးဖွတျခကျြဟုလညျးဆိုနိုငျသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော 1999မှယခုအခြိနျထိ THAAD၏ကွားဖွတျပဈခတျစမျးသပျမှု၁၄ကွိမျအတှငျး ၁၄ကွိမျစလုံးရာနှုနျးပွညျ့အောငျမွငျခဲ့သော စနဈတဈခုဖွဈသောကွောငျ့ပငျဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးအား တာတိုပဈ၊ တာလတျပဈတိုကျခငျြးပဈဒုံးမြား(SRBMs & MRBMs)သာမက ကမ်ဘာ့လထေုအပွငျဖကျမှပဈခတျမညျ့ တာဝေးပဈတိုကျခငျြးပဈဒုံးပြံမြား(ICBM)မြားပါဖကျြစီးနိုငျအောငျ ရညျရှယျတညျဆောကျထားသညျ။ ယခငျရှိပွီးသားစနဈမြားအနဖွေငျ့ ဒသေတှငျးဂပြနျနှငျ့အမရေိကနျစဈသငေ်ျဘာမြားတှငျ Aegisဒုံးပြံကာကှယျရေးစနဈအားတပျဆငျထားသညျ။ ဂပြနျကမျးခွတှေငျလညျး မွပွေငျအခွစေိုကျAegisစနဈအား တညျဆောကျထားသညျ။ Aegisစနဈ၏အားနညျးခကျြမှာ တာတိုနှငျ့တာလတျပဈတိုကျခငျြးပဈဒုံးမြား(SRBMs & MRBMs)ကိုကွားဖွတျနိုငျသျောလညျး ကမ်ဘာ့လထေုအပွငျဖကျမှလာမညျ့ တာဝေးပဈတိုကျခငျြးပဈဒုံးမြား(ICBMs)အား ကွားမဖွတျနိုငျပေ။ ၂၀၀၁ခုနှဈနောကျပိုငျးမှ Aegisစနဈ၏ကွားဖွတျစမျးသပျမှု၃၅ကွိမျတှငျ ၂၈ကွိမျထိအောငျမွငျမှုရှိခဲ့သညျ။
Patriotဒုံးပြံကာကှယျရေးစနဈကိုတော့ တောငျကိုရီးယားနှငျ့ဂပြနျစဈတပျမြားတှငျအသုံးပွုသညျ။ Patriotအား အရေးကွီးနရောမြားအားကာကှယျရနျ ရညျရှယျထုတျလုပျပွီး တောငျကိုရီးယားမွို့တျောဆိုးလျမွို့ကိုကာကှယျရနျ ပတျပတျလညျတှငျနရောခထြားသညျ။ Patriotစနဈနှငျ့ပတျသတျ၍ ၁၉၉၁တှငျဖွဈပှားသောပငျလယျကှစေ့ဈပှဲအရ အငွငျးပှားဖှယျရာမြားစှာလညျးရှိနလေသေညျ။ သို့သျောလညျး မကွာသေးမှီကာလအတှငျးစမျးသပျခကျြမြားအရတော့ ရရှိလာသညျ့အောငျမွငျမှုမှာကနြေပျလောကျစရာရှိသညျ။
နောကျဆုံးအနဖွေငျ့ Ground-based Midcourse Defence(GMD)စနဈမှာ အထကျပါစနဈမြားမှ မွောကျအမရေိကသို့ရောကျလာသောဒုံးပြံမြားအား ကွားဖွတျပဈခတျရနျကွှငျးကနျြပါက နောကျဆုံးအဆငျ့တှငျဖကျြစီးရနျတညျဆောကျထားသညျ။ အဆိုပါစနဈမှာ မွကွေီးထဲသို့siloဖွငျ့ ဒုံးပြံအားထညျ့သှငျးရသောစနဈဖွဈပွီး siloတဈခုတှငျဒုံးပြံတဈလုံးသာဆံ့သညျ။ ကမ်ဘာ့လထေုအပွငျဖကျမှဝငျလာမညျ့ICBMမြားအား ဖကျြစီးနိုငျရနျရညျရှယျသညျ။ ဤစနဈမှာကား အမရေိကနျတို့အဖို့စိတျခယြုံကွညျရနျခကျခဲနလေသေညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော ပဈခတျစမျးသပျမှု၁၈ကွိမျအတှငျး မအောငျမွငျမှု၈ကွိမျခနျ့ရှိသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။
လှနျခဲ့တဲ့နှဈမြားစှာအတှငျး အစ်စရေးလုပျIron Domeစနဈမှာ လှနျစှာနညျးပညာမွငျ့ပွီး အောငျမွငျမှုအမြားဆုံးရရှိခဲ့သော ဒုံးခှငျးဒုံးစနဈတဈခုဖွဈကွောငျး အစ်စရေးကာကှယျရေးတပျမတျောမှသကျသပွေခဲ့သညျ။ ၂၀၀၀မှ၂၀၀၈ခုနှဈအတှငျး ဟားမာဈ့စဈသှေးကွှမြားမှပဈခတျသညျ့ လကျလုပျဒုံးကညျြအစငျးလေးထောငျနှငျ့ မျောတာကညျြလေးထောငျနီးပါးစီအား အစ်စရေးနိုငျငံပျေါသို့မကရြောကျခငျ ဖကျြစီးနိုငျခဲ့သညျ။ တောငျကိုရီးယားအစိုးရအနဖွေငျ့လညျး ၂၀၁၁ခုနှဈတှငျဝယျယူရနျ စတငျစိတျဝငျစားခဲ့ပွီး Iron Domeမြိုးကှဲဖွဈသော C-RAMအား ကိုယျပိုငျတညျဆောကျမညျဖွဈကွောငျး ၂၀၁၇တှငျကွညောခဲ့သညျ။
မညျသို့ပငျဖွဈစကောမူ မွောကျကိုရီးယားဖကျမှ အနုမွူဒုံးပြံစမျးသပျမှုမြားပိုမိုလုပျဆောငျလာသညျ့တိုငျအောငျ တောငျကိုရီးယားအပါအဝငျ အမရေိကနျနှငျ့ဂပြနျနိုငျငံတို့မှ ဒုံးခှငျးဒုံးပဈခတျစမျးသပျမှုမြားအား မွောကျကိုရီးယားနှငျ့အပွိုငျအဆိုငျပွုလုပျမညျမဟုတျပေ။
Author admin adminPosted on March 21, 2018 Categories NewsLeaveacomment on မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးပျံတွေကို အမေရိကန်အနေနဲ့ အမှန်တကယ်ကြားဖြတ်နိုင်သလား?
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများရဲ့ရေတပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာ ကြည်းတပ်က ဝင်ရောက်ပိတ်ဆို့နေသလား
စာရေးသူ: Greg Raymond,ANU
(ဤဆောင်းပါးသည် ဘာသာပြန်ဖြစ်၍ အာဘော်မှာ စာရေးသူအာဘော်သက်သက်သာဖြစ်သည်။ ဘာသာပြန်သူ၏အာဘော် လုံးဝမဟုတ်ပါ။)
အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ရေကြောင်းအရဖိအားပေးမှုတွေကြောင့် လုံခြံရေးဆိုင်ရာမှာ ဖိအားများဖြစ်ပွားလာမှုကြောင့် ဒေသတွင်းမှာ ရေတပ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေ ဖြစ်ပွားလာမယ်လို့ ကာကွယ်ရေးလေ့လာသူအသိုင်းအဝိုင်းကခန့်မှန်းထားပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ဤအချက်ဟာ ဒေသတွင်းတပ်မတော်တွေကို လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင် အငြင်းပွားဖွယ်ပဲဖြစ်ပါသည်။
ဒေသတွင်းရေတပ်များအတွင်းမှာ ရေငုပ်သင်္ဘောများတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အတူ ရေကြောင်းစွမ်းရည်များတိုးတက်လာသော်လည်း စစ်ရေယာဉ်တိုးပွားမှုအများစုကို ကြည့်ပါက ကင်းလှည့်ရေယာဉ်များနှင့် အမြန်သွားတိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်(Fast Attack Craft)များသာ အများစုဖြစ်နေသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဖရီဂိတ်ကဲ့သို ကမ်းလွန်သွားနိုင်သည့်စစ်ရေယာဉ်တိုးပွားလာမှုကလည်း အားရဖွယ်မရှိပါ။ လူအင်အားအရပြောရမယ်ဆိုရင်လည်း ဒေသတွင်းရေတပ်ဖွဲ့များရဲ့ စစ်သည်အင်အားဟာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကြည်းတပ်တွေရဲ့ ငါးပုံတပုံမျှသာ ရှိနေတာတွေ့ရနိုင်ပြီး အနောက်နိုင်ငံရေတပ်များမှာဆိုလျှင်တော့ ရေတပ်ဟာ ကြည်းတပ်စစ်သည်အင်အားရဲ့ ထက်ဝက်ခန့် အနည်းဆုံးရှိနေကြပါသည်။
ဒီအချက်တွေကြောင့်တော့ အရှေ့တောင်အာရှရေတပ်များရဲ့ စွမ်းရည်တိုးတက်လာခြင်းကိုငြင်းပယ်လို့မရနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် အရှေ့တောင်အာရှရေတပ်တွေဟာ တိုးတက်သင့်သလောက် တိုးတက်လာခြင်းမရှိတာကတော့ အမှန်ပဲဖြစ်ပါသည်။ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာ အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးနိုင်မှုကို မှီခိုလွန်းသောကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ အလွယ်တကူအကြောင်းပြချက်ပေးနိုင်သော်လည်း တခြား အရေးကြီးတယ့် အကြောင်းအချက်အလက်များရှိနေပါသေးသည်။
ပထဝီအနေအထားအရ အရှေ့တောင်အာရှဒေသဟာ ရေကြောင်းသွားလာရေးမှာ အရေးပါသော ဒေသဖြစ်သော်လည်း သမိုင်းကြောင်းအစဉ်အလာကတော့ ဒေသတွင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကို ကြည်းတပ်ဖွဲ့များမှာ အာရုံစိုက်စေဖို့ အလေးပေးနေပါသည်။ဒေသတွင်း အစိုးရများအနေနှင့်လည်း ဒီအချက်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် မတတ်နိုင်သောအနေအထားသို့ရောက်ရှိနေပါသည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံမှလွဲ၍ ဒေသတွင်းတပ်မတော်များအပေါ် အရပ်ဘက်သြဇာညောင်းမှုမှာ အခြားနိုင်ငံများတွင်မရှိပါ။ ပရိုဖက်ရှင်နယ်အဆင့်အတန်းရှိတပ်မတော်များမရှိခြင်း နှင့် အရပ်ဘက်အစိုးရများ၏ စစ်ဘက်အပေါ် သြဇာပေးနိုင်မှုနည်းပါးခြင်းတို့သည် ဒေသတွင်းမှာတော့ မထူးဆန်းသောအချက်များအဖြစ်တည်ရှိလျက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေသတွင်း အစိုးရများအနေနှင့် ရေတပ်အား ကြည်းတပ်များကဲ့သို့ ဘဏ္ဏာရေးအရထောက်ပံ့မှုပြုရန်မှာ အတော်ပင်ခက်ခဲသောအရာတခုဖြစ်နေပါသည်။
အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အကြီးမားဆုံး တပ်မတော်တွေတည်ရှိနေသည်ဟု ဆိုနိုင်သော မြန်မာ
ထိုင်း အင်ဒိုနီးရှား တို့တွင်လည်း ကြည်းတပ်၏ အရေးပါမှု အခန်းကဏ္ဏက ရေတပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိနေသည်ဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။ စတော့ခ်ဟုမ်းနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနအင်စတီကျူ(Stockholm International Peace Research Institute)မှာ ထုတ်ဝေသော လက်နက်အရောင်းအဝယ် ဒေတာဘေ့စ်တွင် ၁၉၅၀မှ ၂၀၁၅အတွင်း ဒေသတွင်းရှိ ရေတပ်များအတွက် လက်နက်တင်သွင်းမှုမှာ တသမတ်တည်းရှိခြင်းကို မတွေ့ရပေ။ ဒေသတွင်း ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းများနည်းပညာအကန့်အသတ်ကြောင့် ရေတပ်လက်နက်တင်သွင်းမှုကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တွင် ရေတပ်အတွက် ဦးစားပေးခြင်းရှိမရှိသိရှိနိုင်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ထိုင်းတို့ နိုင်ငံတည်ထောင်စကာလများတွင် ချမှတ်ခဲ့သော စစ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ ကြည်းတပ်ကို ပို၍အလေးပေးခဲ့ပါသည်။ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့များကို တွန်းလှန်နိုင်ရန်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံအနေနှင့် သူ့၏ကြည်းတပ်အတွက် စစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ကို သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး တပ်မ(၁၀)ခု အင်အားရှိသော ကြည်းတပ်ဖွဲ့တခုကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားအနေနှင့် လည်း ဒပ်ခ်ျနယ်ချဲ့များကို ကြည်းတပ်ဦးဆောင်၍ စစ်တိုင်းများခွဲခြားတိုက်ခိုက်သော မဟာဗျူဟာဖြင့် မောင်းထုတ်ခဲ့ကာ ဤမဟာဗျူဟာကပင် ခေတ်သစ်အင်ဒိုနီးရှားတပ်မတော်၏ အခြေခံဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာ ကြည်းတပ်သည်လည်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်း ဂျပန်လက်အောက်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ဖြစ်ပေသည်။
ဤသုံးနိုင်ငံစလုံးတွင် တူညီသည့်အချက်မှာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များက ကြည်းတပ်၏လွှမ်းမိုးမှုကို ဦးတည်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏၁၉၃၂တော်လှန်ရေးအပြီးမှာ နိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကြည်းတပ်ဟာ ထိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအတွက် အာဏာစုစည်းရာနေရာအဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီး အလေးပေးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတော့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော့ ၁၉၆၅ခုနှစ်မှာ အာဏာရရှိခဲ့သော အစိုးရဟာ နိုင်ငံရေးထိန်းချုပ်မှုအတွက် အင်ဒိုနီးရှားတပ်မတော်ရဲ့အခြေချ စစ်တိုင်းများအပေါ်မှာ အလွန်အမင်းမှီခိုခဲ့ရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်တော့ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဖြစ်ပွားသော ခွဲထွက်ရေးအစချီသော နိုင်ငံရေးပြဿနာများက ၁၉၆၂စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ဆယ်စုနှစ်များ ကြာမြင့်လာသည့်အခါမှာတော့ ကြည်းတပ်အရေးပါမှုဟာ လွှမ်းမိုးမှုအသွင်ပုံပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကြည်းတပ်(သို့)စစ်တပ်များရဲ့ နိုင်ငံရေးအရအရေးပါမှုဟာ ကာကွယ်ရေးအခန်းကဏ္ဏမှာပါ မြင့်မားလားခဲ့ပါသည်။ ကြည်းတပ်အရာရှိကြီးတွေဟာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေမှာ နေရာယူလာပြီး ကြည်းတပ်ဟာ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို ထိန်းချုပ်လာနိုင်ကာ ဝေစုအများစုကိုရယူလာနိုင်ပါတော့သည်။ ရွေးကောက်ခံအစိုးရများဟာလည်း ဒီကိစ္စကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခွင့်မရ ဖြစ်နေပါသည်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် အင်ဒိုနီးရှားကြည်းတပ်(သို့)စစ်တပ်ဟာ နိုင်ငံရေးကထွက်ခွာသွားပြီ ဆိုရမည်ဖြစ်သော်လည်း သူရဲ့ အခြေချစစ်တိုင်းတွေဟာ ဒေသတွင်း နိုင်ငံရေးနဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့်နိုင်ငံရေးတွေမှာ သြဇာအတိုင်းအတာတခုရှိနေပါသည်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ ဒီနေရာမှာတော့ သြဇာမသက်ရောက်နိုင်သေးပါဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါသည်။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ကြည်းတပ်(သို့)စစ်တပ် အခန်းကဏ္ဏမြင့်မားမှုဟာ ရေတပ်တွေရဲ့ ခေတ်မီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို လွှမ်းမိုးရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ နိုင်ငံတွေရဲ့ လုံခြုံရေးအခန်းကဏ္ဏမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမလုပ်ဘူးဆိုရင် ရေတပ်တွေဟာ လက်ရှိရနေတယ့်အခြေအနေက တိုးတက်လာစရာ မရှိနိုင်ပါ။ ယခုချိန်မှာ ယခင်ကာလများကထက် တိုးတက်လာတယ်ဆိုနိုင်သော်လည်း ဒေသတွင်းမှာ ၁၉၉၀ကာလများက စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမျိုး မကြုံသေးသမျှ ကာလပတ်လုံးမှာ ကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှုမျိုးမမြင်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အခြေအနေအရ ဒီလိုစီးပွားရေးအခြေအနေဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်ဖို့ ရာခိုင်နူန်းနည်းပါးပါသည်။
နိုင်ငံတကာရေးရာလေ့လာသူများအနေနှင့် ဒေသတွင်းက ရေတပ်တိုးချဲ့ရေးအစီအစဉ်များကို ကြားရတိုင်း အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စွမ်းအပေါ်သတိချပ်စေလိုပါသည်။ ၁၉၉၀ခုနှစ်များက ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ ရေတပ်ကို ဒေသတွင်း အင်အားကြီးရေတပ်အဖြစ်တည်ဆောက်သွားမည် ကြေညာခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၅ခုနှစ် လက်ရှိအခြေအနေကို သုံးသပ်ရာတွင် ထိုင်းရေတပ်အနေနဲ့ ရည်ရွယ်ခဲ့သည်ထက် စစ်သည်အင်အား အရတိုးချဲ့နိုင်မှု မရှိခဲ့ပါ ဖရီဂိတ်စစ်ရေယာဉ်အချို့သာ လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ရေငုပ်သင်္ဘောမရှိသေးဘဲ ပင်လယ်ပြင်သို့ ရံဖန်ရံခါသာ ထွက်သော လေယာဉ်သင်္ဘောငယ်တစင်းသာ လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ Global Maritime Fulcrumခေါ် ရေတပ်တိုးချဲ့ရေး အစီအစဉ်မှာလည်း လက်ရှိအချိန်တွင် မျှော်မှန်းသည့်ရနိုင်သေးပေ။
အချုပ်ပြောရမည်ဆိုလျှင်တော့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအနေနှင့် ကြီးမားသော မဟာဗျူဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ မရှိပါက ရေကြောင်းစွမ်းအားကို အဆင့်မြှင့်ရာ ပင်လယ်ပြင်အား ငြင်းပယ်ခြင်း(sea denial)အဆင့်တွင်ပင် ရုန်းကန်ရနိုင်ပြီး ပင်လယ်ပြင်ထိန်းချုပ်ခြင်း(sea control)နှင့် အင်အားဖြန့်ကြက်ခြင်းစွမ်းရည်တို့ကို ရရန်မှာ ခက်ခဲသောအနေအထားပင်ဖြစ်သည်။ဒေသတွင်း အင်အားကြီးထွားလာသော တရုတ်ရေတပ်အပေါ် ချိန်ခွင်လျှာထိန်းရန်မှာလည်း အမေရိကန်ရေတပ်,ဂျပန်ရေတပ်နှင့် အိန္ဒိယရေတပ်(ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်)တို့ အပေါ်တွင်သာ မူတည်နေအုန်းမည်ဖြစ်သည်။
Greg Raymondဟာ သြစတြေးလျားအမျိုးသားတက္ကသိုလ် မဟာဗျူဟာနှင့်ကာကွယ်ရေးလေ့လာရေးဌာနက သုတေသီတဦးဖြစ်ပါသည်။
#Alfred #GDT #SEA #ANU #ASEAN #Navy
ဘာသာပြန်: Armies overshadow naval modernisation in Southeast Asia,East Asia Forum
အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံမြားရဲ့ရတေပျပွုပွငျပွောငျးလဲမှုတှမှော ကွညျးတပျက ဝငျရောကျပိတျဆို့နသေလား
စာရေးသူ: Greg Raymond,ANU
(ဤဆောငျးပါးသညျ ဘာသာပွနျဖွဈ၍ အာဘျောမှာ စာရေးသူအာဘျောသကျသကျသာဖွဈသညျ။ ဘာသာပွနျသူ၏အာဘျော လုံးဝမဟုတျပါ။)
အရှတေ့ောငျအာရှဒသေအတှငျးမှာ တရုတျနိုငျငံရဲ့ ရကွေောငျးအရဖိအားပေးမှုတှကွေောငျ့ လုံခွံရေးဆိုငျရာမှာ ဖိအားမြားဖွဈပှားလာမှုကွောငျ့ ဒသေတှငျးမှာ ရတေပျအငျအားတိုးခြဲ့မှုတှေ ဖွဈပှားလာမယျလို့ ကာကှယျရေးလလေ့ာသူအသိုငျးအဝိုငျးကခနျ့မှနျးထားပါသညျ။ ဒါပမေဲ့ ဤအခကျြဟာ ဒသေတှငျးတပျမတျောတှကေို လလေ့ာလိုကျမယျဆိုရငျ အငွငျးပှားဖှယျပဲဖွဈပါသညျ။
ဒသေတှငျးရတေပျမြားအတှငျးမှာ ရငေုပျသငေ်ျဘာမြားတိုးပှားလာခွငျးနှငျ့အတူ ရကွေောငျးစှမျးရညျမြားတိုးတကျလာသျောလညျး စဈရယောဉျတိုးပှားမှုအမြားစုကို ကွညျ့ပါက ကငျးလှညျ့ရယောဉျမြားနှငျ့ အမွနျသှားတိုကျခိုကျရေးယာဉျ(Fast Attack Craft)မြားသာ အမြားစုဖွဈနသေညျကို တှနေို့ငျပါသညျ။ ဖရီဂိတျကဲ့သို ကမျးလှနျသှားနိုငျသညျ့စဈရယောဉျတိုးပှားလာမှုကလညျး အားရဖှယျမရှိပါ။ လူအငျအားအရပွောရမယျဆိုရငျလညျး ဒသေတှငျးရတေပျဖှဲ့မြားရဲ့ စဈသညျအငျအားဟာ သကျဆိုငျရာနိုငျငံကွညျးတပျတှရေဲ့ ငါးပုံတပုံမြှသာ ရှိနတောတှရေ့နိုငျပွီး အနောကျနိုငျငံရတေပျမြားမှာဆိုလြှငျတော့ ရတေပျဟာ ကွညျးတပျစဈသညျအငျအားရဲ့ ထကျဝကျခနျ့ အနညျးဆုံးရှိနကွေပါသညျ။
ဒီအခကျြတှကွေောငျ့တော့ အရှတေ့ောငျအာရှရတေပျမြားရဲ့ စှမျးရညျတိုးတကျလာခွငျးကိုငွငျးပယျလို့မရနိုငျပါ။ ဒါပမေယျ့ အရှတေ့ောငျအာရှရတေပျတှဟော တိုးတကျသငျ့သလောကျ တိုးတကျလာခွငျးမရှိတာကတော့ အမှနျပဲဖွဈပါသညျ။ ဒသေတှငျးနိုငျငံတှဟော အမရေိကနျရတေပျရဲ့ လုံခွုံရေးအာမခံခကျြပေးနိုငျမှုကို မှီခိုလှနျးသောကွောငျ့ ဖွဈတယျလို့ အလှယျတကူအကွောငျးပွခကျြပေးနိုငျသျောလညျး တခွား အရေးကွီးတယျ့ အကွောငျးအခကျြအလကျမြားရှိနပေါသေးသညျ။
ပထဝီအနအေထားအရ အရှတေ့ောငျအာရှဒသေဟာ ရကွေောငျးသှားလာရေးမှာ အရေးပါသော ဒသေဖွဈသျောလညျး သမိုငျးကွောငျးအစဉျအလာကတော့ ဒသေတှငျးလကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့မြားကို ကွညျးတပျဖှဲ့မြားမှာ အာရုံစိုကျစဖေို့ အလေးပေးနပေါသညျ။ဒသေတှငျး အစိုးရမြားအနနှေငျ့လညျး ဒီအခကျြကို ပွုပွငျပွောငျးလဲရနျ မတတျနိုငျသောအနအေထားသို့ရောကျရှိနပေါသညျ။ စငျကာပူနိုငျငံမှလှဲ၍ ဒသေတှငျးတပျမတျောမြားအပျေါ အရပျဘကျသွဇာညောငျးမှုမှာ အခွားနိုငျငံမြားတှငျမရှိပါ။ ပရိုဖကျရှငျနယျအဆငျ့အတနျးရှိတပျမတျောမြားမရှိခွငျး နှငျ့ အရပျဘကျအစိုးရမြား၏ စဈဘကျအပျေါ သွဇာပေးနိုငျမှုနညျးပါးခွငျးတို့သညျ ဒသေတှငျးမှာတော့ မထူးဆနျးသောအခကျြမြားအဖွဈတညျရှိလကျြပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဒသေတှငျး အစိုးရမြားအနနှေငျ့ ရတေပျအား ကွညျးတပျမြားကဲ့သို့ ဘဏ်ဏာရေးအရထောကျပံ့မှုပွုရနျမှာ အတျောပငျခကျခဲသောအရာတခုဖွဈနပေါသညျ။
အရှတေ့ောငျအာရှရဲ့ အကွီးမားဆုံး တပျမတျောတှတေညျရှိနသေညျဟု ဆိုနိုငျသော မွနျမာ
ထိုငျး အငျဒိုနီးရှား တို့တှငျလညျး ကွညျးတပျ၏ အရေးပါမှု အခနျးကဏ်ဏက ရတေပျဖှံ့ဖွိုးရေးအပျေါ လှမျးမိုးမှုရှိနသေညျဟု ဆိုနိုငျပသေညျ။ စတော့ချဟုမျးနိုငျငံတကာငွိမျးခမျြးရေးသုတသေနအငျစတီကြူ(Stockholm International Peace Research Institute)မှာ ထုတျဝသေော လကျနကျအရောငျးအဝယျ ဒတောဘစျေ့တှငျ ၁၉၅၀မှ ၂၀၁၅အတှငျး ဒသေတှငျးရှိ ရတေပျမြားအတှကျ လကျနကျတငျသှငျးမှုမှာ တသမတျတညျးရှိခွငျးကို မတှရေ့ပေ။ ဒသေတှငျး ကာကှယျရေးပစ်စညျးစကျမှုလုပျငနျးမြားနညျးပညာအကနျ့အသတျကွောငျ့ ရတေပျလကျနကျတငျသှငျးမှုကို ကွညျ့ခွငျးဖွငျ့ ကာကှယျရေးအသုံးစရိတျတှငျ ရတေပျအတှကျ ဦးစားပေးခွငျးရှိမရှိသိရှိနိုငျသညျ။
အငျဒိုနီးရှားနှငျ့ထိုငျးတို့ နိုငျငံတညျထောငျစကာလမြားတှငျ ခမြှတျခဲ့သော စဈရေးဆုံးဖွတျခကျြမြားမှာ ကွညျးတပျကို ပို၍အလေးပေးခဲ့ပါသညျ။ ကိုလိုနီနယျခြဲ့မြားကို တှနျးလှနျနိုငျရနျအတှကျ ထိုငျးနိုငျငံအနနှေငျ့ သူ့၏ကွညျးတပျအတှကျ စဈမှုမထမျးမနရေစနဈကို သတျမှတျခဲ့ပွီး တပျမ(၁၀)ခု အငျအားရှိသော ကွညျးတပျဖှဲ့တခုကို ဖှဲ့စညျးနိုငျရနျ ကွိုးပမျးခဲ့သညျ။ အငျဒိုနီးရှားအနနှေငျ့ လညျး ဒပျချြနယျခြဲ့မြားကို ကွညျးတပျဦးဆောငျ၍ စဈတိုငျးမြားခှဲခွားတိုကျခိုကျသော မဟာဗြူဟာဖွငျ့ မောငျးထုတျခဲ့ကာ ဤမဟာဗြူဟာကပငျ ခတျေသဈအငျဒိုနီးရှားတပျမတျော၏ အခွခေံဖွဈခဲ့သညျ။ မွနျမာ ကွညျးတပျသညျလညျး ဒုတိယကမ်ဘာစဈတှငျး ဂပြနျလကျအောကျတှငျဖှဲ့စညျးခဲ့ဖွဈပသေညျ။
ဤသုံးနိုငျငံစလုံးတှငျ တူညီသညျ့အခကျြမှာ သကျဆိုငျရာနိုငျငံရေးဖွဈစဉျမြားက ကွညျးတပျ၏လှမျးမိုးမှုကို ဦးတညျစခေဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ထိုငျးနိုငျငံ၏၁၉၃၂တျောလှနျရေးအပွီးမှာ နိုငျငံရေးမငွိမျမသကျမှုမြားဖွဈပှားခဲ့ပွီး ကွညျးတပျဟာ ထိုငျးခေါငျးဆောငျတှအေတှကျ အာဏာစုစညျးရာနရောအဖွဈရောကျရှိလာပွီး အလေးပေးတညျဆောကျခဲ့ပါတော့သညျ။ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံမှာတော့ ၁၉၆၅ခုနှဈမှာ အာဏာရရှိခဲ့သော အစိုးရဟာ နိုငျငံရေးထိနျးခြုပျမှုအတှကျ အငျဒိုနီးရှားတပျမတျောရဲ့အခွခြေ စဈတိုငျးမြားအပျေါမှာ အလှနျအမငျးမှီခိုခဲ့ရပါသညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျတော့ တိုငျးရငျးသားမြားနှငျ့ ဖွဈပှားသော ခှဲထှကျရေးအစခြီသော နိုငျငံရေးပွဿနာမြားက ၁၉၆၂စဈအာဏာသိမျးမှုဖွဈပျေါစခေဲ့သညျ။
ဆယျစုနှဈမြား ကွာမွငျ့လာသညျ့အခါမှာတော့ ကွညျးတပျအရေးပါမှုဟာ လှမျးမိုးမှုအသှငျပုံပျေါလာခဲ့ပါသညျ။ထိုငျးနဲ့မွနျမာနှဈနိုငျငံလုံးတှငျ ကွညျးတပျ(သို့)စဈတပျမြားရဲ့ နိုငျငံရေးအရအရေးပါမှုဟာ ကာကှယျရေးအခနျးကဏ်ဏမှာပါ မွငျ့မားလားခဲ့ပါသညျ။ ကွညျးတပျအရာရှိကွီးတှဟော ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာနတှမှော နရောယူလာပွီး ကွညျးတပျဟာ ကာကှယျရေးအသုံးစရိတျကို ထိနျးခြုပျလာနိုငျကာ ဝစေုအမြားစုကိုရယူလာနိုငျပါတော့သညျ။ ရှေးကောကျခံအစိုးရမြားဟာလညျး ဒီကိစ်စကို ပွုပွငျပွောငျးလဲခှငျ့မရ ဖွဈနပေါသညျ။ဥပမာပွောရမယျဆိုရငျ အငျဒိုနီးရှားကွညျးတပျ(သို့)စဈတပျဟာ နိုငျငံရေးကထှကျခှာသှားပွီ ဆိုရမညျဖွဈသျောလညျး သူရဲ့ အခွခေစြဈတိုငျးတှဟော ဒသေတှငျး နိုငျငံရေးနဲ့ နိုငျငံတျောအဆငျ့နိုငျငံရေးတှမှော သွဇာအတိုငျးအတာတခုရှိနပေါသညျ။အငျဒိုနီးရှားရဲ့ ဒီမိုကရစေီပွုပွငျပွောငျးလဲရေးဟာ ဒီနရောမှာတော့ သွဇာမသကျရောကျနိုငျသေးပါဘူးလို့ ဆိုနိုငျပါသညျ။
အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံတှမှော ကွညျးတပျ(သို့)စဈတပျ အခနျးကဏ်ဏမွငျ့မားမှုဟာ ရတေပျတှရေဲ့ ခတျေမီပွုပွငျပွောငျးလဲမှုကို လှမျးမိုးရှိနမှောဖွဈပွီးတော့ နိုငျငံတှရေဲ့ လုံခွုံရေးအခနျးကဏ်ဏမှာ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေးမလုပျဘူးဆိုရငျ ရတေပျတှဟော လကျရှိရနတေယျ့အခွအေနကေ တိုးတကျလာစရာ မရှိနိုငျပါ။ ယခုခြိနျမှာ ယခငျကာလမြားကထကျ တိုးတကျလာတယျဆိုနိုငျသျောလညျး ဒသေတှငျးမှာ ၁၉၉၀ကာလမြားက စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးမှုမြိုး မကွုံသေးသမြှ ကာလပတျလုံးမှာ ကွီးမားသော ပွောငျးလဲမှုမြိုးမမွငျနိုငျဘူးလို့ ဆိုနိုငျပါသညျ။ လကျရှိကမ်ဘာ့စီးပှားရေး အခွအေနအေရ ဒီလိုစီးပှားရေးအခွအေနဖွေဈရပျမြိုး ဖွဈပျေါဖို့ ရာခိုငျနူနျးနညျးပါးပါသညျ။
နိုငျငံတကာရေးရာလလေ့ာသူမြားအနနှေငျ့ ဒသေတှငျးက ရတေပျတိုးခြဲ့ရေးအစီအစဉျမြားကို ကွားရတိုငျး အမှနျတကယျ အကောငျအထညျဖျောနိုငျစှမျးအပျေါသတိခပျြစလေိုပါသညျ။ ၁၉၉၀ခုနှဈမြားက ထိုငျးနိုငျငံအနနေဲ့ ရတေပျကို ဒသေတှငျး အငျအားကွီးရတေပျအဖွဈတညျဆောကျသှားမညျ ကွညောခဲ့သျောလညျး ၂၀၁၅ခုနှဈ လကျရှိအခွအေနကေို သုံးသပျရာတှငျ ထိုငျးရတေပျအနနေဲ့ ရညျရှယျခဲ့သညျထကျ စဈသညျအငျအား အရတိုးခြဲ့နိုငျမှု မရှိခဲ့ပါ ဖရီဂိတျစဈရယောဉျအခြို့သာ လကျခံရရှိခဲ့ပွီး ရငေုပျသငေ်ျဘာမရှိသေးဘဲ ပငျလယျပွငျသို့ ရံဖနျရံခါသာ ထှကျသော လယောဉျသငေ်ျဘာငယျတစငျးသာ လကျခံရရှိခဲ့ပါသညျ။ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ၏ Global Maritime Fulcrumချေါ ရတေပျတိုးခြဲ့ရေး အစီအစဉျမှာလညျး လကျရှိအခြိနျတှငျ မြှျောမှနျးသညျ့ရနိုငျသေးပေ။
အခြုပျပွောရမညျဆိုလြှငျတော့ အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံမြားအနနှေငျ့ ကွီးမားသော မဟာဗြူဟာ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြား မရှိပါက ရကွေောငျးစှမျးအားကို အဆငျ့မွှငျ့ရာ ပငျလယျပွငျအား ငွငျးပယျခွငျး(sea denial)အဆငျ့တှငျပငျ ရုနျးကနျရနိုငျပွီး ပငျလယျပွငျထိနျးခြုပျခွငျး(sea control)နှငျ့ အငျအားဖွနျ့ကွကျခွငျးစှမျးရညျတို့ကို ရရနျမှာ ခကျခဲသောအနအေထားပငျဖွဈသညျ။ဒသေတှငျး အငျအားကွီးထှားလာသော တရုတျရတေပျအပျေါ ခြိနျခှငျလြှာထိနျးရနျမှာလညျး အမရေိကနျရတေပျ,ဂပြနျရတေပျနှငျ့ အိန်ိဒယရတေပျ(ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျ)တို့ အပျေါတှငျသာ မူတညျနအေုနျးမညျဖွဈသညျ။
Greg Raymondဟာ သွစတွေးလြားအမြိုးသားတက်ကသိုလျ မဟာဗြူဟာနှငျ့ကာကှယျရေးလလေ့ာရေးဌာနက သုတသေီတဦးဖွဈပါသညျ။
ဘာသာပွနျ: Armies overshadow naval modernisation in Southeast Asia,East Asia Forum
Author admin adminPosted on March 21, 2018 Categories NewsLeaveacomment on အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများရဲ့ရေတပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာ ကြည်းတပ်က ဝင်ရောက်ပိတ်ဆို့နေသလား
GDT page ကိုအားပေးနေသောစာရှုသူများခင်ဗျာ
GDT page ကိုအားပေးနေသောစာရှုသူများခင်ဗျာ….
အမေရိကန်ရေတပ်မှ အနားယူထားပြီးဖြစ်သော ကွန်မန်
ဒါဖြစ်သလို ယခုအခါရောင်းအားကောင်းသော စာရေး
ဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Rick Campbell က ရေတပ်သားများ၏ပင်လယ်ပြင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများ၏အဖြစ်သရုပ်မှန်များကို သူ၏စာအုပ်တွင် ချပြရေးသားခဲ့သည်။
“သင်မသိသေးသော ရေငုပ်သဘောင်္ပေါ်မှ အကြောင်းအ
ရာ (၁၂)ချက်”ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆောင်းပါးတပုဒ်
GDT page ကိုအားပေးနသေောစာရှုသူမြားခငျဗြာ….
အမရေိကနျရတေပျမှ အနားယူထားပွီးဖွဈသော ကှနျမနျ
ဒါဖွဈသလို ယခုအခါရောငျးအားကောငျးသော စာရေး
ဆရာတယောကျဖွဈတဲ့ Rick Campbell က ရတေပျသားမြား၏ပငျလယျပွငျတှငျတာဝနျထမျးဆောငျမှုမြား၏အဖွဈသရုပျမှနျမြားကို သူ၏စာအုပျတှငျ ခပြွရေးသားခဲ့သညျ။
“သငျမသိသေးသော ရငေုပျသဘောင်္ပျေါမှ အကွောငျးအ
ရာ (၁၂)ခကျြ”ဟူသောခေါငျးစဉျဖွငျ့ ဆောငျးပါးတပုဒျ
Author admin adminPosted on March 21, 2018 Categories NewsLeaveacomment on GDT page ကိုအားပေးနေသောစာရှုသူများခင်ဗျာ
(Anti-Tank Weapons) vs (Trophy APS)
တင့်ကားရဲ့ သံမဏိထူထဲမှုကို အဓိကထားပြီး တင့်ဖျက်လက်နက်တွေကို ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်
လှုပ်ရှားသွားလာရ ခက်ခဲတယ် တံတားတွေ
ဖြတ်ကူးဖို့ ခက်ခဲတယ် လောင်စာဆီလိုအပ်တဲ့
Composite armour အပါအ၀င်
အဲဒီလို အဆင့်မြင့် Armour တွေထဲမှာ
(Explosive Reactive Armour) ခေါ်
တကယ်တော့ ERA ဆိုတာ တင့်ကားမှာ
ကပ်ထားတဲ့ ဗုံးတွေပါပဲ RPG နဲ့
တင့်ဖျက်ဒုံးတွေ တင့်ကားကို ထိမှန်တဲ့အခါ
အဲဒီ ERA တွေက တန်ပြန်ပေါက်ကွဲပြီး
အဲဒီနောက်မှာ ERA တပ်ဆင်ထားတဲ့
အဲဒီလက်နက်တွေဟာ ထိပ်ဖူး ၂ ခုကို
ပထမထိပ်ဖူးအသေးစားက ERA ကို
RPG နဲ့ ပုခုံးထမ်းတင့်ဖျက်ဒုံးတွေဟာ
မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဒေါ်လာ ၂ သန်းအထိ
တန်ကြေးရှိတဲ့ ရုရှား T-72 တင့်ကားဟာ
ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပဲတန်တဲ့ RPG-7 ထိပ်ဖူးကြောင့်
Battleship ကြီးတွေလို ခေတ်ကုန်တော့မယ်လို့
ဒါပေမဲ့ တင့်ကားခေတ်ကို ဆက်ပြီး
(Active Protection System) ခေါ်
APS ဆိုတာ ရန်သူ့တင့်ဖျက်လက်နက်တွေ
မိမိတင့်ကားကို မထိမှန်အောင် ကာကွယ်တဲ့စနစ်ပါ
APS မှာ Soft Kill နဲ့ Hard Kill ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိတယ်
အဆင့်မြင့် Soft Kill စနစ်တစ်ခုဟာ
laser range finder, Target designator
Infrared Seeker တွေကို နှောင့်ယှက်ခြင်းဖြင့်
Target Lock မလုပ်နိုင်အောင် ကာကွယ်တယ်
ရှုပ်ထွေးအောင် နှောင့်ယှက်ပြီး မထိမှန်အောင်
ရုရှား T-90 တင့်ကားမှာ တွေ့ရတဲ့
မျက်လုံးနီ ၂ လုံးက soft kill စနစ်သုံး
Shtora APS အစိတ်အပိုင်းတွေပါ
Hard Kill ဆိုတာ မိမိတင့်ကားဆီ
ဥပမာ Isreal Trophy APS, Iron Fist APS
Tank to Tank battle အတွက် ရှေ့ပိုင်း
အလွန်မြင့်မားပါတယ် ဒါ့အပြင် Turret
ချော်ထွက်သွားအောင် Turret ကို
အဲဒါက တင့်ကားချင်း ထိပ်တိုက်ပစ်ခတ်ရတဲ့
Tank to Tank battle အတွက်ပဲကောင်းပါတယ်
မြို့ပြတိုက်ပွဲ Urban Warfare တွေမှာ
အပေါ်စီးမှ နောက်မှ ဘေးမှ စသဖြင့်
အဲဒါကြောင့် အစ္စရေးဟာ တင့်ကားရဲ့
ဘေးပတ်လည်နဲ့ အပေါ် ၃၆၀ ဒီဂရီလုံး
ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ Trophy-APS စနစ်ကို
အဲဒါဟာ အစ္စရေးတင့်ကားတွေကို ကာကွယ်ဖို့
Hard Kill system သုံးထားတဲ့ အစ္စရေးရဲ့
Trophy APS စနစ်ဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး
တိုက်ပွဲသက်သေပြပြီး Combat Proven
ဖြစ်တဲ့ APS စနစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်
အစ္စရေးတွေဟာ Trophy APS ကို အောင်မြင်စွာ
Combat debut of Trophy APS
(Trophy APS ၏ ပွဲဦးထွက်အောင်မြင်မှု)
၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က
ဂါဇာနယ်စပ်မှာ အစ္စရေး Markava MK IV
တင့်ကားရဲ့ Trophy APS ဟာ စစ်သွေးကြွတွေ
ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ 9K1152 Metis-M
အမျိုးအစား တင့်ကားဖျက်ဒုံးကို ပထမဆုံး
ပစ်ချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ် Metis-M တင့်ဖျက်ဒုံးဟာ
ရုရှားလုပ် ခေတ်မီ Man Portable Anti-Tank
Guided Missile ဖြစ်ပြီး အဖျက်စွမ်းအား
အလွန်ပြင်းထန်ပါတယ် ERA ခံထားရင်တောင်
သံမဏိထု ၉၅၀ မီလီမီတာ (၃ ပေထုသံမဏိ) အထိ
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာ
Kissufim junction အနီးမှာ ကင်းလှည့်နေတဲ့
အစ္စရေးမာကာဗာတင့်ကားရဲ့ Trophy APS ဟာ
စစ်သွေးကြွတွေ ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ 9M113 Konkurs
အမျိုးအစား ရုရှားလုပ် တင့်ဖျက်ဒုံးတစ်ခုကို
၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းမှာ အစ္စရေးဟာ
Operation Protective Edge ကို ဆင်နွဲခဲ့တယ်
Trophy APS စနစ်တပ်ဆင်ထားတဲ့
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့မှာ
အစ္စရေးမာကာဗာတင့်ကားရဲ့ Trophy APS က
advance guided anti-tank missile
ကို တုံ့ပြန်ပစ်ခတ် ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ရာ
Kornet-E ဟာ အလွန်တိကျတဲ့
laser beam riding ခေါ်
ERA နဲ့ကာကွယ်ထားတဲ့ သံမဏိထု
၁၂၀၀ မီလီမီတာ (၄ပေထုသံမဏိ) ကို
Trophy APS သာ မကာကွယ်နိုင်ရင်
ပြင်းထန်တဲ့ တင့်ဖျက်ဒုံးကို မခံနိုင်ပါဘူး
အဲဒီအချိန်ကစပြီး Operation Protective Edge
တစ်လျောက်လုံး Trophy APS ဟာ
Protective Edge တစ်လျောက်
၁၅ ကြိမ်ရှိခဲ့ရာ Trophy APS က
Kornet အမျိုးအစား လေဆာပဲ့ထိန်းစနစ်သုံး
ရုရှားလုပ် Konkurs တင့်ဖျက်ဒုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
Trophy APS vs RPG-29
RPG-29 ဆိုတာ အမေရိကန် M1A1
Main Battle Tank ကို ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့
ရုရှားလုပ် နောက်ဆုံးပေါ် RPG ဖြစ်ပါတယ်
RPG-29 ဟာ ထိပ်ဖူး ၂ ဆင့်ပါပါတယ်
ERA သို့မဟုတ် Cage Armor ကို
၁၉၉၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က
TsNIIO 643a testing facility စမ်းသပ်ကွင်းမှာ
ရုရှားဟာ နောက်ဆုံးပေါ် Kontakt-5 ERA
(Explosive Reactive Armour)တပ်ဆင်ထားတဲ့
T-90 တင့်ကားကို RPG-29 နဲ့ပစ်ခတ်စမ်းသပ်ရာ
၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့က
အီရတ်မှာ အမေရိကန် M1A1 တင့်ကားဟာ
RPG-29 ထိမှန်ပြီး စစ်သည် ၂ ဦးသေဆုံး
အဲဒီနောက်မှာလည်း M1A1 တင့်ကားအချို့
RPG-29 ရဲ့ အဖျက်စွမ်းအားနဲ့ အစ္စလာမ်မစ်
ကြောက်ရွံ့တဲ့ အတွက် အမေရိကန်ဟာ
အီရတ်စစ်တပ်ကို ရုရှားထံမှ RPG-29
၂၀၀၆ ခုနှစ် လက်ဘနွန်စစ်ပွဲမှာ
ဟဇ်ဘိုလာတွေရဲ့ RPG-29 ကြောင့်
အစ္စရေးသတင်းစာ Haaretz က
RPG-29 wasamajor source of
IDF casualties (အစ္စရေးစစ်သည်များ
RPG-29 ကြောင့်ဖြစ်သည်)လို့ ဖော်ပြခဲ့တယ်
Trophy APS မတပ်ဆင်ရသေးဘူး
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာတော့
Trophy APS နဲ့ RPG-29 တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲ
Trophy-APS တပ်ဆင်ထားတဲ့ အစ္စရေး
Merkava IV တင့်ကားဟာ ဂါဇာမှာ
RPG-29 ကို အောင်မြင်စွာ တုံ့ပြန်ပစ်ခတ်
စစ်သွေးကြွတစ်ဦးက YouTube ပေါ်ကို
Trophy-APS ရဲ့အစွမ်းကို မျက်ဝါးထင်ထင်
အစ္စရေး Merkava IV တင့်ကားတွေဟာ
RPG-29 နဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရပေမယ့်
Trophy-APS ဟာ မိမိဆီ ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့
ဒါကြောင့် Operation Protective Edge မှာ
ဘယ်တင့်ကားမှ ၂ ချက်ဆက်တိုက် အပစ်မခံခဲ့ရဘူး
Kornet-E, Konkurs, Metis နဲ့ RPG-29 တို့လို
Trophy APS ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်
အစ္စရေးဟာ Trophy-APS ကို
မော်ဒယ် ၃ မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်
Trophy-HV for MBTs (Trophy အကြီးစား)
Trophy-HV ဟာ တင့်ကားတွေအတွက်ဖြစ်ပြီး
စီစဉ်ပေးပါတယ် Merkava IV တင့်ကားမှာ
Trophy-MV for APCs/AFVs
Trophy-MV ဟာ လူတင်သံချပ်ကာ
Trophy-HV နီးပါး ကာကွယ်မှုပေးနိုင်ပါတယ်
Trophy-LV for Humvee Jeep and
Trophy-LV ဟာ Humvee Jeep ကားလို
RPG တွေကို ထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်
တငျ့ကားရဲ့ သံမဏိထူထဲမှုကို အဓိကထားပွီး တငျ့ဖကျြလကျနကျတှကေို ကာကှယျခဲ့ကွပါတယျ
လှုပျရှားသှားလာရ ခကျခဲတယျ တံတားတှေ
ဖွတျကူးဖို့ ခကျခဲတယျ လောငျစာဆီလိုအပျတဲ့
Composite armour အပါအဝငျ
အဲဒီလို အဆငျ့မွငျ့ Armour တှထေဲမှာ
(Explosive Reactive Armour) ချေါ
တကယျတော့ ERA ဆိုတာ တငျ့ကားမှာ
ကပျထားတဲ့ ဗုံးတှပေါပဲ RPG နဲ့
တငျ့ဖကျြဒုံးတှေ တငျ့ကားကို ထိမှနျတဲ့အခါ
အဲဒီ ERA တှကေ တနျပွနျပေါကျကှဲပွီး
အဲဒီနောကျမှာ ERA တပျဆငျထားတဲ့
အဲဒီလကျနကျတှဟော ထိပျဖူး ၂ ခုကို
ပထမထိပျဖူးအသေးစားက ERA ကို
RPG နဲ့ ပုခုံးထမျးတငျ့ဖကျြဒုံးတှဟော
မျောဒယျပျေါမူတညျပွီး ဒျေါလာ ၂ သနျးအထိ
တနျကွေးရှိတဲ့ ရုရှား T-72 တငျ့ကားဟာ
ဒျေါလာ ၁၀၀ ပဲတနျတဲ့ RPG-7 ထိပျဖူးကွောငျ့
Battleship ကွီးတှလေို ခတျေကုနျတော့မယျလို့
ဒါပမေဲ့ တငျ့ကားခတျေကို ဆကျပွီး
(Active Protection System) ချေါ
APS ဆိုတာ ရနျသူ့တငျ့ဖကျြလကျနကျတှေ
မိမိတငျ့ကားကို မထိမှနျအောငျ ကာကှယျတဲ့စနဈပါ
APS မှာ Soft Kill နဲ့ Hard Kill ဆိုပွီး ၂ မြိုးရှိတယျ
အဆငျ့မွငျ့ Soft Kill စနဈတဈခုဟာ
Infrared Seeker တှကေို နှောငျ့ယှကျခွငျးဖွငျ့
Target Lock မလုပျနိုငျအောငျ ကာကှယျတယျ
ရှုပျထှေးအောငျ နှောငျ့ယှကျပွီး မထိမှနျအောငျ
ရုရှား T-90 တငျ့ကားမှာ တှရေ့တဲ့
မကျြလုံးနီ ၂ လုံးက soft kill စနဈသုံး
Shtora APS အစိတျအပိုငျးတှပေါ
Hard Kill ဆိုတာ မိမိတငျ့ကားဆီ
Tank to Tank battle အတှကျ ရှပေို့ငျး
အလှနျမွငျ့မားပါတယျ ဒါ့အပွငျ Turret
ခြျောထှကျသှားအောငျ Turret ကို
အဲဒါက တငျ့ကားခငျြး ထိပျတိုကျပဈခတျရတဲ့
Tank to Tank battle အတှကျပဲကောငျးပါတယျ
မွို့ပွတိုကျပှဲ Urban Warfare တှမှော
အပျေါစီးမှ နောကျမှ ဘေးမှ စသဖွငျ့
အဲဒါကွောငျ့ အစ်စရေးဟာ တငျ့ကားရဲ့
ဘေးပတျလညျနဲ့ အပျေါ ၃၆၀ ဒီဂရီလုံး
ကာကှယျပေးနိုငျဖို့ Trophy-APS စနဈကို
အဲဒါဟာ အစ်စရေးတငျ့ကားတှကေို ကာကှယျဖို့
Hard Kill system သုံးထားတဲ့ အစ်စရေးရဲ့
Trophy APS စနဈဟာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး
တိုကျပှဲသကျသပွေပွီး Combat Proven
ဖွဈတဲ့ APS စနဈလညျး ဖွဈပါတယျ
အစ်စရေးတှဟော Trophy APS ကို အောငျမွငျစှာ
(Trophy APS ၏ ပှဲဦးထှကျအောငျမွငျမှု)
၂၀၁၁ ခုနှဈ မတျလ ၂၉ ရကျနကေ့
ဂါဇာနယျစပျမှာ အစ်စရေး Markava MK IV
တငျ့ကားရဲ့ Trophy APS ဟာ စဈသှေးကွှတှေ
ပဈခတျလိုကျတဲ့ 9K1152 Metis-M
အမြိုးအစား တငျ့ကားဖကျြဒုံးကို ပထမဆုံး
ပဈခဖြကျြဆီးနိုငျခဲ့တယျ Metis-M တငျ့ဖကျြဒုံးဟာ
ရုရှားလုပျ ခတျေမီ Man Portable Anti-Tank
Guided Missile ဖွဈပွီး အဖကျြစှမျးအား
အလှနျပွငျးထနျပါတယျ ERA ခံထားရငျတောငျ
သံမဏိထု ၉၅၀ မီလီမီတာ (၃ ပထေုသံမဏိ) အထိ
၂၀၁၂ ခုနှဈ သွဂုတျလ ၁ ရကျနမှေ့ာ
Kissufim junction အနီးမှာ ကငျးလှညျ့နတေဲ့
အစ်စရေးမာကာဗာတငျ့ကားရဲ့ Trophy APS ဟာ
စဈသှေးကွှတှေ ပဈခတျလိုကျတဲ့ 9M113 Konkurs
အမြိုးအစား ရုရှားလုပျ တငျ့ဖကျြဒုံးတဈခုကို
၂၀၁၄ ခုနှဈ နှဈလယျပိုငျးမှာ အစ်စရေးဟာ
Operation Protective Edge ကို ဆငျနှဲခဲ့တယျ
Trophy APS စနဈတပျဆငျထားတဲ့
၂၀၁၄ ခုနှဈ ဇူလိုငျလ ၁၄ ရကျနမှေ့ာ
အစ်စရေးမာကာဗာတငျ့ကားရဲ့ Trophy APS က
ကို တုံ့ပွနျပဈခတျ ဖကျြဆီးနိုငျခဲ့ရာ
Kornet-E ဟာ အလှနျတိကတြဲ့
laser beam riding ချေါ
ERA နဲ့ကာကှယျထားတဲ့ သံမဏိထု
၁၂၀၀ မီလီမီတာ (၄ပထေုသံမဏိ) ကို
Trophy APS သာ မကာကှယျနိုငျရငျ
ပွငျးထနျတဲ့ တငျ့ဖကျြဒုံးကို မခံနိုငျပါဘူး
အဲဒီအခြိနျကစပွီး Operation Protective Edge
တဈလြောကျလုံး Trophy APS ဟာ
Protective Edge တဈလြောကျ
၁၅ ကွိမျရှိခဲ့ရာ Trophy APS က
Kornet အမြိုးအစား လဆောပဲ့ထိနျးစနဈသုံး
ရုရှားလုပျ Konkurs တငျ့ဖကျြဒုံးတှပေဲဖွဈပါတယျ
RPG-29 ဆိုတာ အမရေိကနျ M1A1
Main Battle Tank ကို ဖကျြဆီးနိုငျတဲ့
ရုရှားလုပျ နောကျဆုံးပျေါ RPG ဖွဈပါတယျ
RPG-29 ဟာ ထိပျဖူး ၂ ဆငျ့ပါပါတယျ
ERA သို့မဟုတျ Cage Armor ကို
၁၉၉၉ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ ၂၀ ရကျနကေ့
TsNIIO 643a testing facility စမျးသပျကှငျးမှာ
ရုရှားဟာ နောကျဆုံးပျေါ Kontakt-5 ERA
(Explosive Reactive Armour)တပျဆငျထားတဲ့
T-90 တငျ့ကားကို RPG-29 နဲ့ပဈခတျစမျးသပျရာ
၂၀၀၇ ခုနှဈ စကျတငျဘာလ ၅ ရကျနကေ့
အီရတျမှာ အမရေိကနျ M1A1 တငျ့ကားဟာ
RPG-29 ထိမှနျပွီး စဈသညျ ၂ ဦးသဆေုံး
အဲဒီနောကျမှာလညျး M1A1 တငျ့ကားအခြို့
RPG-29 ရဲ့ အဖကျြစှမျးအားနဲ့ အစ်စလာမျမဈ
ကွောကျရှံ့တဲ့ အတှကျ အမရေိကနျဟာ
အီရတျစဈတပျကို ရုရှားထံမှ RPG-29
၂၀၀၆ ခုနှဈ လကျဘနှနျစဈပှဲမှာ
ဟဇျဘိုလာတှရေဲ့ RPG-29 ကွောငျ့
အစ်စရေးသတငျးစာ Haaretz က
IDF casualties (အစ်စရေးစဈသညျမြား
RPG-29 ကွောငျ့ဖွဈသညျ)လို့ ဖျောပွခဲ့တယျ
Trophy APS မတပျဆငျရသေးဘူး
၂၀၁၄ ခုနှဈ ဇူလိုငျလ ၂၂ ရကျနမှေ့ာတော့
Trophy APS နဲ့ RPG-29 တို့ရဲ့ တိုကျပှဲ
Trophy-APS တပျဆငျထားတဲ့ အစ်စရေး
Merkava IV တငျ့ကားဟာ ဂါဇာမှာ
RPG-29 ကို အောငျမွငျစှာ တုံ့ပွနျပဈခတျ
စဈသှေးကွှတဈဦးက YouTube ပျေါကို
Trophy-APS ရဲ့အစှမျးကို မကျြဝါးထငျထငျ
အစ်စရေး Merkava IV တငျ့ကားတှဟော
RPG-29 နဲ့ အကွိမျကွိမျပဈခတျခံခဲ့ရပမေယျ့
Trophy-APS ဟာ မိမိဆီ ပဈခတျလိုကျတဲ့
ဒါကွောငျ့ Operation Protective Edge မှာ
ဘယျတငျ့ကားမှ ၂ ခကျြဆကျတိုကျ အပဈမခံခဲ့ရဘူး
Kornet-E, Konkurs, Metis နဲ့ RPG-29 တို့လို
Trophy APS ရဲ့ကြေးဇူးကွောငျ့
အစ်စရေးဟာ Trophy-APS ကို
မျောဒယျ ၃ မြိုးနဲ့ထုတျလုပျထားပါတယျ
Trophy-HV for MBTs (Trophy အကွီးစား)
Trophy-HV ဟာ တငျ့ကားတှအေတှကျဖွဈပွီး
စီစဉျပေးပါတယျ Merkava IV တငျ့ကားမှာ
Trophy-MV ဟာ လူတငျသံခပျြကာ
Trophy-HV နီးပါး ကာကှယျမှုပေးနိုငျပါတယျ
Trophy-LV ဟာ Humvee Jeep ကားလို
RPG တှကေို ထိရောကျစှာကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ
Author admin adminPosted on March 21, 2018 Categories NewsLeaveacomment on (Anti-Tank Weapons) vs (Trophy APS)